Dad Tahriibeyaal oo lagu qabtay Garoowe • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dad Tahriibeyaal oo lagu qabtay Garoowe
Dad Tahriibeyaal oo lagu qabtay Garoowe
April 13, 2010 - By: Abdirahman. A
Taliyaha Ciidanka Booliska qaybta gobolka Nugaal C/raxmaan Abshir Faarax ayaa maanta Saxaafada u sheegay in Ciidanka Booliska degmada Garoowe ay xalay kasoo qabteen Kantroolka Koonfureed ee magaalada dad gaaraya ilaa iyo 21-qof oo u sheegay in ay yihin dad tahriibeyaal uuna socday magaalada Bosaaso si ay uga tahriibaan.
Shir Jira’id oo uu ku qabtay Taliyaha Saldhiga dhexe ee Garoowe oo hada lagu hayo wuxuu sheegay in ay dadkaasi dib ugu celinayaan halka ay marki hore ka yimaadeen iyagoo gaariga ay soo raaceen ay uga qaadi doonaan lacagti uu kasoo qaatay si ay ugu noqdaan goobihi ay kasoo socdaaleen.
Taliyaha ayaa mar wax laga waydiiyey sida ay ku cadeyn karaan dadkaan in ay yihin Tahriibeyaal ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameyeen dadkaan oo ay hada ku jiraan kuwa mar hore ay dib u celiyeen kuwaas oo dib uga soo noqday goobti lagu celiyey.
Wuxuuna hadalkiisa ku daray in dadkaasi ay ka yimaadeen Koonfuurta dalka Soomaaliya ayadoo ay kasoo carareen dagaalada halkaas kasi socdaan.
Maamulka Puntland ayaa tiro dhowr jeer hore qab qabtay dad tahriibeyaal ah oo dib looga celiyey degaanada Puntland,waxaana ay masuuliyinta Puntland sheegeen in ay si aad ah ula dagaalami doonaan dadka tahriib doonka ah iyo dadka wax tahriibiya.